AFCON: ‘Tichine mukana’ | Kwayedza
13 Jan, 2022 - 11:01 2022-01-13T11:20:30+00:00 2022-01-13T11:20:30+00:00 0 Views
AIMBOVE murairidzi wemaWarriors – Joey ‘Mafero’ Antipas – okurudzira chikwata chenyika ichi kuti chisawore mwoyo asi kuti chigobata basa sebasa nemusi weChishanu apo chichasangana neMalawi mumutambo wechipiri muboka racho reGroup B.
MaWarriors ari kuCameroon uko ari kukwikwidza kumutambo we2021 Total Energy Africa Cup of Nations (AFCON).
Mumutambo wekutanga, maWarriors akakundwa 1-0 neSenegal izvo zvakarwadza vatsigiri vose venhabvu sezvo akakundirwa mumiti rekupedzisira apo maLions of Teranga akazopihwa pena iyo akanwisa mutambo ukazopera uri 1-0.
Mumutambo wese uyu, maWarriors aitamba zvinonwisa mvura izvo zvakaona mubati wepagedhi – Petros Mhari – achirwa semvumba achishungurudza vatambi veSenegal vanosanganisira Sadio Mane avo vakatadza kuzunza mambure kusvikira vazoita zvekupihwa pena.
Mafero anoti matambiro akaita chikwata chaNorman Mapeza chemaWarriors nemusi weMugovera anodasisa saka vanofanirwa kuramba vaine matambiro mamwe chete musi weChishanu apo vachasangana neMalawi.
“MaWarriors akadadisa kunyangwe hazvo takazobvutirwa mutambo uyu pekupedzisira, asi takange takaibata Senegal mutambo wese uye chikwata chenyika ichi chaitamba zvinonwisa mvura.
“Ngatichitarire zviri mberi musi weChishanu apo tiri kusangana neThe Flames of Malawi. Tiri kufanira kuhwina mutambo uyu neunozotevera weGuinea kuti tifambire mberi mumutambo weAFCON. Mitambo miviri yasara iyi yakatikoshera saka tinofanirwa kuihwina,” anodaro.
MaWarriors achatamba neThe Flames musi weChishanu nenguva dza6 manheru uye achazobandana neGuinea neChipiri svondo rinotevera.
Musi weChishanu uyu, zvimwe zvikwata zviri kuboka reGroup B izvo zvatotungamira – Senegal neGuinea sezvo zvave nezvibodzwa zvitatu – ndizvo zvichavhurisa mutambo apo zvichatamba na3 masikati. Izvi zvinoreva kuti uyu mutambo wekuti maWarriors achange achiongorora kuti uchafamba sei sezvo vazhinji vave kutarisira kuti Senegal ikunde Guinea apo chikwata chenyika ichi chozokundawo Malawi neGuniea mumitambo miviri yasara.
Mafero anoti anoshuvira kuti kudai Senegal yakunda Guinea.
“Tingade hedu kutarisa kune zvimwe zvikwata kuti zviri kutamba sei, asi chikuru ndechekuti isu mitambo yedu miviri yasara ngatiihwine zvine mutsindo tigobudirira kuenda kuround of 16 uko tisati tamboenda kubva zvatakatanga kukwikwidza kuAFCON,” anodaro Mafero.
MaWarriors paakatanga kurwira kuenda kumutambo weAFCON, aitungamirwa naMafero uyo akarairidza mitambo miviri yekutanga iyo yakaona achiita mangange – 0-0 neBotswana mutambo wekutanga uyo wakatambirwa muno kozoti wechipiri maWarriors akahwina 2-1 kuZambia.